काखीमा आउने पसिनाबाट कसरी मुक्ति पाउने ? | Samacharpati काखीमा आउने पसिनाबाट कसरी मुक्ति पाउने ? – Samacharpati
काठमाडौं । काखीको छाला शरीरको अन्य स्थानको छालाभन्दा धेरै संवेदनशील हुन्छ । यो ठाउँको छालाको स्वच्छता र सुरक्षाको लागि हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । अनुहार र शरीरको बाँकी भाग जस्तै काखीको सुरक्षा र स्वच्छताबारे ध्यान दिनु र यसको हेरचाह महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यदि तपाईंले काखीको रौं खौरिनुभयो भने जसमा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वा बिटा हाइड्रोक्सी एसिड जस्ता सक्रिय तत्वहरू पाइन्छ । यसले हाम्रो काखीको समस्याबाट छुटकारा पाउन मद्धत गर्छ । यसले काखीमा देखिने कालो दागलाई कम गर्न पनि मद्धत गर्छ ।
काँग्रेस नेता खनालद्वारा सहयोग
आजकाे माैसम :-आंशिक देखि सामान्य बदली
भरतपुरमा सारस फुड उद्योगमाआगलागी,करिव दुई करोड बराबरको क्षति